Axkaamta Ramadaanta (Qaybta 8aad) – Ilaalinta Carrabka iyo Wakhtiga - Somaliland Post
Home News Axkaamta Ramadaanta (Qaybta 8aad) – Ilaalinta Carrabka iyo Wakhtiga
Axkaamta Ramadaanta (Qaybta 8aad) – Ilaalinta Carrabka iyo Wakhtiga
Waxaynu halkaa ka arkaynaa carrabku in uu yahay waxa samaha iyo xummaanta inoo soo jiida, haddii waxaynu ku hadlayno yahay wax Alle SWT raali galinnayn sida xadiiska ka muuqata ayeynu waxaynu ku galabsannay naar ku galaynaa.
Illaahay isaga oo inoo baanaya wuxu ina leeyahay “Miyaanan u samayn laba indhood, carrab iyo labadiisi daan.” intan aad ku socota ba ee aad wax ku arkaysaba annagaa leh. Sidoo kale carrabkan iyo labada daan ee isu hagaajiya ama isu toosiya hadalka annagu miyaanan ku siin weeye su’aashu, haa Allow adaa na siyey, sidaa awgeed waxa innala gudboon mahadcelin.
Illaahay SWT mar kale wuxu innoogu baanay inuu ina siiyey carrab hadalka soo saara, “Wuxu idin baray hadalka.” Ogow mar kasta oo aad hadal maqasho waxa hadalka soo saara waa carrabka, kaas oo aynu ku kala duwannahay makhluuqaadka kale.
Sidoo kale Alle SWT wuxu inoo sheegay eray kasta oo afkeena ka soo baxa inuu yahay mid guntan oo la qorayo, “Kama soo baxo hadal ‘afkooga’ illaa waxa tirinaya oo ogsoon Malaa’ig.”
Akhlaaq marka laga hadlayo waa habdhaqanka qofka oo toosnaada, waana mid diintu dhiirigalisay in lala yimaaddo, iyadoo dadka ku tartansiinaysana u tilmaantay in maalinta qiyaame sida loo kala akhlaaq roon yahay loo kala darajo sarrayn doono waxaana taa muujinaya xadiiska sugan ee Rasuulku CSW leeyahay, “Waxa Mu’miniinta ugu darajo sarreeya kooga ugu akhlaaq wanaagsan.” Hubaashii habdhaqanka suubani wuxuu qofka gaadhsiiya sarreedo aan salaad badnaan iyo soon badnaan lagu gaadhin.
Waa habdhaqan uu hormood ugu ahaa ummadda Rasuulku CSW miyaanad arag marka Alle SWT leeyahay, “Waxa kuu sugnaatay akhlaaq sarraysa.” Sidoo kale Caai’sha Rc ayaa mar la waydiyey habdhaqankii Rasuulka CSW waxay ku tidhi, “Habdhaqankiisu wuxuu ku salaysnaa Qur’aanka.”
Habdhaqanka tolmoon waxa lagu gartaa af gaabni iyo dhawrsanaan sidaa ajligeed ayaa ergaygii Alle SWT lagu sheegi jiray inuu ahaa mid tilmaamaha ku suntan, xadiis ka suganna wuxu ahaa, “Alle wuxu ugu jecel yahay dadka qofka aan hadalka badnayn, wuxuna ugu neceb yahay qofka hadalka badan ee bilaa murtida ah.”